Cilmi ogaado cudurka xoolaha cusub oo looga hortago faafidda - Shiinaha Chongqing Fangtong
Solution isku duro
Bolusdose / Kiniiniga
Cilmi ogaado cudurka xoolaha cusub oo looga hortago faafidda
Ka dib markii waxbarashada hidaha ee weylaha doorinaynaa, cilmi baaris waa inay awoodaan inay cudur aan la aqoon hore ka mid ah lo'da Holsten oo helay qaawin. Oo dibiga taranta oo ka kaas oo ka yimaada hidda iyo sidaas lahayo ku soo billowda ayaa hadda la hoos geliyey si looga hortago cudurada ka sii faafo.
lo 'Dansk shahwada of dibi taranta afgembi gudahood waxaa loo isticmaalaa in inseminate badan oo lo'da. Maadaama uu inseminations badan dibi awoodo sidaas aabbihiis kun oo weylaha. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la ogaado in dibi afgembi qaado cudurada la iska dhaxlo.
Tani waa dhab ahaan waxa cilmi ee jaamacadda Kobanheegan ayaa kaliya sameeyey. Daraasad lagu sameeyay ka mid ah weylaha Holsten oo lagu daabacay joornaalka sayniska ee BMC Hidaha waxay ogaadeen cudur ilaa haatan undescribed xayawaanka ka mid ah - lahayo ku ah wajiga waxay doorteen inay u yeedhaan wajiga Kobac Syndrome. Cilmi baarayaashu waxay ogaadeen isbedel ayaa hidde-waa sababta cudurka dhex weylalka iyo waxa dib u keenay dibi taranta gaar ogan. Oo dibiga ayaa hadda la hoos gelin ah si looga hortago xaaladaha dheeraad ah oo cudurka ka mid ah weylaha cusub ee dhashay.
'Waxaan ogaaday in dibi taranta ayaa samaysay isbedel ayaa ku yimaada unugyada ee unugyada shahwada soo saara, taas oo keentay in lahayo ku weylaha dhexdooda. Oo dibiga maray hidda wadayaasha ah si boqolkiiba ay farcankaaga, kaas oo aanu ka dhawaajin sida badan 0.5. Laakiinse dibigii this mar hore dhalay in ka badan 2,000 oo weylalka iyo laga yaabo laga yaabo inay u yimaadeen inay aabbihiis xitaa ka sii badan. All weylaha ay maroorsamaan dhintay ama waa lagu baabbi'in doonaa, maxaa yeelay, iyagu waxay la il daran. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la ogaado sababta 'ahayd, ayuu yidhi borofisar Jørgen Agerholm ka Department of Veterinary Clinical Sciences.
Ka dib markii macluumaad ka dhakhaatiirta weylalka la deformations wajiga helay, Jørgen Agerholm tegey raadinaya kiisas badan oo uu network ee dhakhaatiirta xoolaha, oo ay ku jiraan on Facebook. Ka dibna wuxuu helay weylaha more baaritaan.
DNA laga weylaha ay maroorsamaan waxaa la hoos geliyey waxbarashada hidaha, iyo halkan cilmi aqoonsaday qaybta guud ee hiddawadayaasha ah oo ay ku qoran waxaa isbeddel aan helay caadi Holsten DNA. Waxaa sabab u ah khariidado hore dhamaystiran ee caadiga ah Holsten DNA.
Cilmibaadhayaasha ayaa markaas ogaaday in deformations la mid ah wajiga waxaa ka mid ah aadanaha helay, iyo kuwaan waxaa keena Isbedelo in qayb ka mid ah hiddawadayaasha ah, dheeraad ah si gaar ah hiddo-FGFR2 dhexdooda ilmaha dhashay. hiddo waxaa la sequenced ee hiddawadayaasha weylaha ', oo cilmibaadhayaasha ka dibna ay awoodaan si loo ogaado in isbedel ku yimaad hidda waxa uu sababay cudurka weylaha dhexdooda. Cudurku wuxuu aadanaha sidaas caawiyay cilmi-socodka ah ee lagu aqoonsanayo isbedel hiddo.
Cilmibaadhayaasha ayaa sidoo kale baaray DNA ka waalidka iyo walaalaha ahaa weylihii 'iyo bartay in isbedel ayaa sidoo kale halkan heysatay. Taas macnaheedu waa in weylihii horumariyo lahayo ku marka isbedel ayaa la maray ka mid hooyada ama aabbaha oo aan labada hooyada iyo aabbaha, kaas oo kiiska la cuduro badan oo la iska dhaxlo.
"Our Ujeedada had iyo jeer waxay ahayd in hoos tirada weylaha buka oo dhintay, sida qaar ka mid ah cudurada la iska dhaxlo waa mid aad u daran oo invalidating. Xaaladdan oo kale indhaha sudhay hoos ka madaxdii weylaha, iyo deformations wajiga ka dhigay inay leeyihiin dhibaatooyin neefsasho oo daran. Ma aha wax adag in la qiyaaso xanuunka ku dhacdo. Natiijada cilmi-baarista sida kuwan kordhin doonaa daryeelka xoolaha ah by xadidaysa faafitaanka cudurada sida. Iyo dabcan waxa kale oo hagaajinaysaa xaaladda dhaqaale oo ka mid ah milkiilayaasha lo'da, kuwaas oo awood si loo yareeyo khasaaraha ', sharxayaa Jørgen Agerholm, oo sidoo kale ah Head of Section ah ee caafimaadka xoolaha Dhalmada iyo dhalmada.
aad fariin noo soo dir:
* CAPTCHA: Fadlan dooro Truck
waqti Post: Feb-27-2018